iinyanga 5 kwiveki 1 eyadlulayo #1239 by josmor
Ndandisanda kulandwa kwi-software ye-Canary Islands i-1 ne-2. Kodwa ndikhangele ukuba iziphumo eziboniswe kwividiyo zisebenza kuphela ne-REX 2.0. Ndikhange i-intanethi, kwaye andizange ndiyifumane. Ndingayifumana njani imiphumo emihle yeeCanary Islands?
iinyanga 5 kwiveki 1 eyadlulayo #1240 by Dariussssss
Le yindawo engafanelekanga ukuthumela iingxaki onayo kunye ne-sim yakho. Nceda uthumele le ngxaki phantsi kwesihloko ngasinye, nokuba yi-FSX okanye i-P3D.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda.
Ixesha ukwenza page: 0.244 imizuzwana